अनलाइन इन्फोग्राफिक जेनरेटर, उपकरण र प्लेटफार्मों
बिहीबार, मे 28, 2015 बुधवार, मई 5, 2021 Douglas Karr
यो इन्फोग्राफिक्स उद्योग विस्फोट हुँदैछ र अब हामी सहयोग गर्न केहि नयाँ उपकरणहरू देखिरहेका छौं। हाल, इन्फोग्राफिक्स एजेन्सीहरूले अनुसन्धान, डिजाईन गर्न र शानदार इन्फोग्राफिकको प्रमोट गर्न $ २k र k 2k बीचमा शुल्क लिन्छन्।
यी उपकरणहरूले तपाईंको इन्फोग्राफिक्सको विकासलाई धेरै कम खर्चिलो बनाउँदछन्, डिजाईन र प्रकाशन गर्न सजिलो, र केहि तपाईंको इन्फोग्राफिक्स वितरित र बढुवा गरिएको हेर्नका लागि रिपोर्टिंग मोड्युलहरू समावेश गर्दछ। तिनीहरू मध्ये केही अलि जवान छन् त्यसैले तपाईंले केही बग्गीसँग डिल गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर तिनीहरू सबै धेरै प्रभावशाली छन्।
सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै मोहित तथ्या .्कहरूको थुप्रोमा बसिरहनुभएको हुन सक्छ र एक इन्फोग्राफिकमा चार्टहरूको गुच्छा प्रहार गर्न लोभ्याउन सक्छ। त्यो एक इन्फोग्राफिकको लागि होईन, एक्सेलको लागि यही हो। एक इन्फोग्राफिकको केन्द्रीय विषयवस्तु हुनुपर्दछ जुन तपाइँ लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँ तपाइँको श्रोतालाई बुझाउन खोजिरहनु भएको कुरामा एक विशिष्ट लक्ष्यको साथ। एक इन्फोग्राफिकले कहानीको माध्यमबाट प्रयोगकर्तालाई हिड्दछ ताकि तिनीहरू सजिलैसँग जानकारी राख्न र बुझ्न सक्दछन्। तपाईंको इन्फोग्राफिक केहि कल-टु-एक्शनको साथ समाप्त हुनुपर्दछ यसलाई सँगै टाई गर्न।
Easel.ly - दृश्य विचार अनलाइन सिर्जना र साझेदारी गर्नुहोस्
आईबीएम धेरै आँखाहरु - तपाईंको डाटामा अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईको मनपर्ने जानकारी कसैलाई पनि मन नपराउनुहोस्। हजारौंको समुदायसँग विचारहरू साटासाट गर्नुहोस्। विश्वको सबैभन्दा सम्मानित कम्पनीहरु द्वारा एक तपाईलाई ल्याइयो। र ... यो १००% नि: शुल्क हो।
तालिका - दृश्यमा मिनेटमा तपाईंको डाटा साझा गर्नुहोस्। सित्तैमा।
इन्फोग्राम - हामी तपाईंलाई तपाईंको इन्फोग्राफिक्सको लागि उत्तम कम्पोनेन्ट र विषयवस्तुहरू ल्याउन अद्भुत डिजाइनरहरूसँग काम गर्दछौं। केवल तपाइँ आफैले निर्माण गर्न चाहानुभएको छनौट गर्नुहोस्।
ग्राफ दिमाग - दृश्य प्रभावशाली पोस्टरहरू, लेख र प्रस्तुतिकरणहरू सिर्जना गर्नुहोस्। तिनीहरूको लाइब्रेरीमा ,3,000००० भन्दा बढी वैज्ञानिक चित्रण र तयार-देखि-कार्य इन्फोग्राफिक लेआउट सामेल छन्।
Piktochart - Piktochart इन्फोग्राफिक्स को निर्माण स्वायत्तता को लागी पहिलो अनलाइन वेब अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। यसको दर्शन गैर डिजाइनरहरू / प्रोग्रामरहरूलाई उनीहरूको उद्देश्य / ब्रान्डको प्रमोट गर्न र रमाईलो र आकर्षक तरिकामा शिक्षाको लागि अन्तर्क्रियात्मक इन्फोग्राफिक्सहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन हो।
भेन्गेज - भेन्गेजले तपाईंलाई कस्टम इन्फोग्राफिक्सहरू सिर्जना गर्न र प्रकाशन गर्न, तपाईंको दर्शकहरूलाई संलग्न गराउन, र तपाईंको नतिजाहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। भेन्गेज बजारहरू र प्रकाशकहरूको लागि सबभन्दा शक्तिशाली इन्फोग्राफिक्स प्रकाशन मञ्च हो।
भस्म आकर्षक प्रस्तुतिकरणहरू, इन्फोग्राफिक्स, वेब ब्यानरहरू र छोटो एनिमेसनहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको एक नि: शुल्क उपकरण हो। भिस्म प्रयोगकर्ताहरू प्रोफेशनल टेम्प्लेटको प्रिसेटबाट सुरू गर्न सक्छन् वा खाली क्यानभासबाट सुरू गर्न सक्दछन् र उनीहरूको सामग्रीहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्, उनीहरूको आवश्यकताको लागि पूर्ण रूपमा व्यक्तिगतकृत।
तपाईं आफ्नो iOS उपकरणबाट इन्फोग्राफिक्स पनि बनाउन सक्नुहुनेछ इन्फोग्राफिक निर्माता.
खुलासा: हामी यी प्रोग्रामहरू मध्ये केहीको एक सम्बद्ध हौं र यो लेख भर लिंकहरू प्रयोग गर्दैछौं।
टैग: इन्फोग्राफिक डिजाइन गर्नुहोस्सहजैजेनरेटरजानकारीमूलकइन्फोग्रामइन्फोग्राफिक डिजाइनरइन्फोग्राफिक जेनरेटरइन्फोग्राफिक निर्माताइन्फोग्राफिक प्लेटफर्मइन्फोग्राफिक टेम्प्लेटहरूआईओएस इन्फोग्राफिक निर्मातामार्केटिंग इन्फोग्राफिक्सअनलाइन जेनरेटरहरूpiktochartउपकरणvenngagevisme
मई 28, 2012 मा 12: 56 PM
सूचीको लागि धन्यवाद। यो पक्कै पनि उपयोगी छ किनकि सामाजिक सञ्जाल संसारले पाठ भन्दा बढी भिजुअल रूपान्तरण गरिरहेको छ।
मई 28, 2012 मा 6: 55 PM
सहमत @valerie_keys:disqus! र इन्फोग्राफिक्समा निपुण डिजाइन टोलीलाई भर्ती गर्नु धेरै मार्केटिङ बजेटको पहुँच बाहिर हुन सक्छ। यी तपाईंको आफ्नै विकास गर्ने र लागतहरू कम राख्ने उत्कृष्ट तरिकाहरू हुन्!
मतलब2prosper
मई 28, 2012 मा 7: 34 PM
मैले यहाँ केही उत्कृष्ट सामग्री पढेको छु।
पुन: भ्रमणको लागि निश्चित रूपमा बुकमार्क गर्न लायक। म आश्चर्यचकित छु कि तपाईले कति प्रयास गर्नुभयो
यस प्रकारको अद्भुत जानकारीमूलक साइट बनाउनको लागि राख्नुहोस्।
सेप्टेम्बर 28, 2014 बेलुका 8:53 बजे
डगलसलाई उत्कृष्ट लेख्नुहोस् र Visme लाई ध्यान दिनुभएकोमा धन्यवाद। केवल थप्नको लागि, Visme इन्फोग्राफिक्स भन्दा पर जान्छ; यसले तपाईंलाई सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ
एनिमेसन र प्रस्तुतीकरणहरू सहित कुनै पनि प्रकारको दृश्य सामग्री।